Boliiska oo dib u eegi doona dembiyada lagu guul darreeystey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Sofia Thermaenius/SR
Boliiska oo dib u eegi doona dembiyada lagu guul darreeystey
La daabacay tisdag 20 november 2012 kl 17.01
Hoowlaha dembiyada ee ciidanka ammaanku ka wadeen dembiyada loo caal waayey sidii looga guul-gaari lahaa ayaa galey weji cusub oo hor leh. Guddigii hoowlahan loo xil-saarey ayaa dhowaantan la ho-tegi doona maamulka ciidanka fikirkooda la xiriira sidii howshaa loo sii taaba-qaadi lahaa, marka laga hadlayo dembiyada dilalka ee aan lagu guuleeysan in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeeysay, sida uu qoray war-geeyska Metro.
Hoowlahan la xiriira ka soo baaraan-degidda sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dembiileyaasha geeystey dialalka aan lagu guuleeysan ayey ka dambeeyeen culimada Leif GW Persson iyo Mikael Rying, iyagoona bishii agoosto soo hor-dhigay madaxa maamulka boliiska.
Dembiyadan (cold case) oo tiradoodu gaarsiisan yihiin 450 dil, ayaa hoowshooda dib loo cusbooneeysiyey iyada oo is-bedel lagu sameeyey xeerkii u degsanaa sannadkii 2010 oo aan la burin karin wixii intaa ka dambeeyey ama aan xilli ku xirnayn.
Qiyaastii 75% ee dembiyadaa ayaa ka dhacey saddex gobol ee dalka ugu waaweyn, iyadoona sida la sheegeyo ugu yaraan boqolaal ka mid ah ey dhici karto in boorka dib looga jafo oo baaritaan hor leh lagu sameeyo.